Installaltion – Page2– Ck4Ubuntu
December 3, 2013 chitkoko	2 Comments Community, Installaltion, sh, Software
Ubuntu 13.10 OS အား ကျွန်တော်၏ စက်မှာ သွင်းပြီးနောက် စက်စတင် ဖွင့်သည့် အချိန်မှ စတင်၍ login screenဝင်ရောက်ရန် ကြာချိန်မှာ ၅၀ စက္ကန်. ဖြစ်ပါသည်။ထို့နောက်ထပ်မံ၍လိုအပ်သော မရှိမဖြစ်ထည့်သွင်း သင့်သည့်Applications များ၊ source များကို ထပ်မံ ထည့်သွင်းပါသည်။ဦးစွာပထမ မြန်မာ fonts and keyboardအတွက်အလွယ်တစ်ကူအဆင်ပြေစေသော myanmar fonts installation ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် zawgyixkb.zip ကို download ပြု လုပ်ပါ –
ပြီးနောက် zawgyixkb.zip ကို right click နှိပ်၍ Open with Archive manager ကိုရွေးပါ – extract to Desktop ပြုလုပ်ပါ ၊ပြီးနောက် zawgyi_xkb.sh ကို အောက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းနိုင်သည်-
sudo chmod +x zawgyi_xkb.sh
ပြီးနောက် .. System Setting > Text Entry ကိုဖွင့် ပါ ။
Burmese Zawgyi keyboard ကို + မှတဆင့်ထပ်ထည့်ပါ ။
Switch to next source using တွင် သင် အသုံးပြုလိုသော short cut ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
Repositories ကို Update ပြုလုပ်ရန် –
Dash > Type- update
Software updater ကို နှိပ်ပါ။( သို့ )
Crtl + Alt + T > open Terminal
သင်သည် Ubuntu ကို installation ပြုလုပ်စဉ် 3rd party software များနှင့် mp3 plugin တို့ကို အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတို့တွင် အမှန်မခြစ်ခဲ့ လျှင် ..
mp3, avi, flash videos ဖိုင် format တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် apt:ubuntu-restricted-extras ဟု Ubuntu Software Center တွင် ရျာဖွေ ထည့်သွင်းပါ ။
သို့ Open Terminal ( Ctrl + Alt + T)
မှတ်ချက်။ ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် Ubuntu တွင် Open Source software များသာ ပါဝင်ပါသည် ။
Dash > Software & Updates > Additional Drivers မှ တဆင့် သင် ၏ hardware driver များကို စစ်ဆေးထည့်သွင်းနိုင်သည် ။
Graphic card driver များထည့်သွင်းရာတွင် အခက်အခဲရှိပါက
http://ask.ubuntu-mm.net တို့တွင် မေးမြန်းနိုင်သည်။
Script for Ubuntu
Ubuntu စတင်အသုံးပြုသူတို့ အဆင်ပြေစေရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ file ကို downloadပြုလုပ်ပါ ။ အောက်ဖော်ပြပါ shfile တွင် သင်လိုအပ်သော APPLICATION , SOFTWARE နှင့် EBOOKS တို့ ကို သင်၏စက်အတွင်းသို့ အဆင့်ဆင့်ထည့်သွင်းသွားမည်။ password =YOUR LOGIN PASSWORD
ပြီးနောက် -install-20-thing.sh ဖိုင်ကို Desktop သို့ copy ကူးပါ ၊
Open Terminal _Ctrl + Alt + T and copy and step by step …
sudo +x install-20-thing.sh
sudo ./ install-20-thing.sh
REMARKS >>> Make sure your machine must have INTERNET CONNECTION .
thank for reading my article .
Tags: Software, thingstodo, Ubuntu13.10	|
Install/Upgrade to Linux Kernel 3.8.0 Installation in Ubuntu
March 13, 2013 chitkoko	Leaveacomment Installaltion, Kernel
Linux Kernel 3.8.0 သည် bug fixes ပြုပြင်၍ ပိုမို ကောင်းမွန်စေသော kernel အသစ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Kernel 3.8.0 တွင်အသစ်ထပ်မံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များကိုအောက်ပါအတိုင်းလေ့လာနိုင်သည်-
Updates to XFS
Adding support for Samsung’s F2FS file-system
Improved Btrfs performance
Improved support for ACPI power management
Improved support for audio drivers
Dropping support for the Intel 386 CPU
Improved performance for AMD Radeon/Nvidia
Adding support for Intel “Haswell” CPU, etc.
Linux Kernel 3.8.0 Installation
Kernel 3.8.0 ကိုလွယ်လင့်တစ်ကူ သင်၏ system သို့ထည့်သွင်းနိုင်ရန် Bash Script ကိုဖန်တီးပေးထားပါသည်။ Kernel 3.8.0 ကို စက်အတွင်းထည့်သွင်းရန် အတွက် –
Ubuntu/Linux Mint (12.10/12.04 or Mint 14/13)တို့တွင်ထည့်သွင်းရန်Terminal ကိုဖွင့်ပြီး ၊ အောက်ဖော်ပြပါ commands တို့ကို ရိုက်ပါ။
နောက်ဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် Kernel 3.8 ကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Linux Kernel 3.8.0 Removal
အကယ်၍သင်သည် ယခင် အတိုင်းပြန်လိုချင်၍ kernel 3.8.0 ကို ပြန်ဖျက်ချင်လျှင် အောက်ဖော်ပြပါ commands ကို terminal တွင်ရိုက်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Tags: Kernel 3.8.0	|
Installation kernel 3.6.9 in Ubuntu/Linux Mint (12.10/12.04 or Mint 14/13)
March 13, 2013 chitkoko	8 Comments Installaltion, Kernel
Kernel 3.6.9 ကို Ubuntu 12.10 /12.04 နှင့် Linux Mint 14/ 13 တို့ တွင် install နှင့် uninstall ပြုလုပ်ခြင်း
Linux Kernel 3.6.9 သည် bug fixesများ ပြုပြင်၍ ပိုမို ကောင်းမွန်စေသော kernel အသစ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ALSA: hda – Fix missing beep on ASUS X43U notebook
ALSA: ua101, usx2y: fix broken MIDI output
iwlwifi: fix monitor mode FCS flag
drm/radeon: add new SI pci id
mmc: sdhci-s3c: fix the wrong number of max bus clocks
mwifiex: fix system hang issue in cmd timeout error case
x86, efi: Fix processor-specific memcpy() build error
MPI: Fix compilation on MIPS with GCC 4.4 and newer
NFC: Fix nfc_llcp_local chained list insertion
get_dvb_firmware: fix download site for tda10046 firmware
pstore/ram: Fix printk format warning
bas_gigaset: fix pre_reset handling
PM / QoS: fix wrong error-checking condition
jbd: Fix lock ordering bug in journal_unmap_buffer()
can: peak_usb: fix hwtstamp assignment
Linux Kernel 3.6.9 Installation
Kernel 3.6.9 ကိုလွယ်လင့်တစ်ကူ သင်၏ system သို့ထည့်သွင်းနိုင်ရန် Bash Script ကိုဖန်တီးပေးထားပါသည်။ Kernel 3.6.9 ကို စက်အတွင်းထည့်သွင်းရန် အတွက် –
cd /tmp wget http://dl.dropbox.com/u/47950494/upubuntu.com/linux-kernel-3.6.9 -O linux-kernel-3.6.9
chmod +x linux-kernel-3.6.9
sudo sh linux-kernel-3.6.9
Linux Kernel 3.6.9 Removal
အကယ်၍သင်သည် ယခင် အတိုင်းပြန်လိုချင်၍ kernel 3.6.9 ကို ပြန်ဖျက်ချင်လျှင် အောက်ဖော်ပြပါ commands ကို terminal တွင်ရိုက်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
sudo apt-get purge linux-image-3.6.9*
အထက်ဖော်ပြပါ kernel ကိုထည့်သွင်းရင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောအခက်အခဲများအတွက် tutorial.
Tags: Installation, Kernel 3.6.9, Ubuntu	|